Emuva ngo-1895 yanyatheliswa encwadini yendaba eqanjiwe yesayensi by HG Wells 'Isikhathi Machine ". Umqondo eyabizwa ezijatshulelwa bonke, kungakhathaliseki izinga lemfundo kanye nesimo nomphakathi. Iphupho ngenjabulo ibekezelelwe esikhathini esizayo futhi babe sibukele intuthuko zakamuva ubuchwepheshe noma emuva esikhathini esidlule, ngizama ukuthonya inkambo imicimbi. Ezinye musa nje iphupho, kodwa nawo wazama kabusha umshini ezinjalo. Kungani kukhona! Rumour has it ukuthi imfundiso efanayo wokuhlobana kwezinto Einstein kwavela ngemva the usinga jikelele emhlabeni umshini isikhathi.
Kuyoba kude kangakanani ukuhamba ngesikhathi?
Kusukela ngaleso sikhathi, eminyakeni eyikhulu isidlulile, futhi isithakazelo kuzo zonke ukunyakaza intertemporal kuyaqhubeka. Umqondo umshini isikhathi liye langena isichazamazwi abalobi yesayensi njengoba amalungiselelo obungenakuphikwa ezikhona ngekusasa. Ngo amaphephandaba lapho, wabonakala sematheni ezikhangayo: "Indlela yokwenza umshini isikhathi ifotho okukhethekile?" Lokhu kusho ukuthi abantu (enisezweni igalaji, ngubani etafuleni endaweni yokugeza yesayensi) sisalwa ukudalwa i-prototype yangempela. Intshiseko yabo iyangikhuthaza futhi yokuthi cishe zonke izinto esizayo kusungulwe HG Wells, selivele likhona: isikhala namarokhethi, kwesimo endaweni ethule cwaka, izikhali ezingamagciwane, laser nabanye. Ngakho, mhlawumbe, futhi ukuhamba ngesikhathi eduze kakhulu?
isikhathi umshini Physics
Umqondo thuluzi travel kungaba uyibize ngokuthi kumnandi. Iyiphi into eqhubekayo ngendlela yesikhashana - livela, ukuguga, ukugqoka, lantambama. Ngakolunye uhlangothi, le nqubo ngokuphelele iphethwe yi- akekho. Yebo, lobuchwepheshe intuthuko azuze lokho indoda kungaba baphile isikhathi eside service yayo. Kodwa isikhathi emuva - umbuzo kwenye ezingeni. Ngakho-ke, le mishini yayithatha isikhathi (indlela yokukwenza) - kuba umsebenzi hhayi nje ukuba siqhubekele phambili endleleni ukugeleza ezayo imizuzu traffic futhi amahora, kodwa esethola ukunyakaza injini.
Umbuzo olandelayo: Move lapho?
Umhlaba ihamba ilanga. izixhumanisi zayo emkhathini kushintsha njalo. Ngaphezu kwalokho, i-Earth uzungeza emhlabeni axis awo siqu, okusho ukuthi noma iyiphi into ku ubuso bayo, egijimela esizayo noma esikhathini esidlule, kungenzeka ngesikhathi, kodwa endaweni engafanele. Esikhathini evulekile, isibonelo. It kuvela ukuthi hhayi kuphela kudingeka aphathe indlela yokwenza umshini isikhathi, lapho imfundo akwaziwa ukwakha umshini ukuthi zizobalwa phansi imizuzu ahoxise noma Imodi okusheshayo, kodwa futhi acabangele izixhumanisi kwendawo, okungase ezingalindelekile. Ngakho, incazelo umshini isikhathi ongasetshenziselwa ukulekelela ngokuphepha: idivayisi inabasebenzi ukunyakaza esethola ohlelweni izixhumanisi kwendawo, isikhathi nasekuthengeni.
It kuvela, incazelo esiqondile umshini isikhathi kalula ngokuthini yilowo nalowo yesimanje. Lapho kudalwa isimo akusona kamnandi kangaka. Nakuba singeke sikwazi ongaphika ukuthi abanye lwesintu intuthuko ifinyelele futhi ngale ndlela. Ngokwesibonelo, u-Einstein azithola efanayo wakwazi ukwakha lwesistimu sikwazi ukukufihlela isithwali hhayi kuphela anezibonisi ethungatha imishini, kodwa futhi zangisiza ekwenzeni kwakhe ukuphuma emehlweni yizibukeli ezibukelini wonke amaminithi 5. Nokho, izisebenzi wakuthola kunzima ukutshela lapho bafike basale khona sonke lesi sikhathi, futhi uma endaweni ethile e Abide jikelele. Ukuhlolwa kungaba uyibize ngokuthi yimpumelelo. Ngokushesha wonke kufa ekuguleni engaziwa. Ngakolunye uhlangothi, u-Einstein azithola wafakazela ukuthi umuntu angalawula isikhathi. It uhlala kuphela ukuqonda ukuthi kungenzeka umshini ngesikhathi sangempela indlela yokukwenza?
Izinto zesimanje umbono kwesikhathi
theory ka-Einstein ye kwezinto ebonisa ukuthi Isikhathi nomkhathi surface ezithile, kungekho emehlweni ebonakalayo lomuntu. Lokhu amaqabunga heterogeneous kakhulu ukwakheka kanye yakha umgodi futhi kumiswa convex, imibimbi nokusasamba. Isibonelo owaziwa ngaba nokucindezeleka yesikhashana - a black hole.
Ososayensi baye isikhathi esingaphezu kwesigamu sekhulu leminyaka ukusebenza yokutadisha kwazo. Bafika esiphethweni sokuthi izimbobo black abakhona hhayi kuphela emkhathini kodwa futhi izinhlayiya ezincane kunazo yazo zonke elisizungezile - athomu. Lezi Wormholes ethulwa Imigudu intertemporal ukuthi ukuxhuma amaphuzu amabili, izikhathi million ngokunciphisa hhayi kuphela ibanga elibahlukanisile, kodwa futhi ingasheshi isikhathi wakhona ibanga. Ababona esitebeleni. Babe zinyamalale ke ukuvela. Futhi iyini imbangela yalezi Ukulahleka - kuseyimpicabadala.
sazi bodumo Stiven Hoking uqinisekile ngolunye usuku amandla ethu zobuchwepheshe ukufinyelela ezingeni yokuthi asikwazi kuphela ukusizakala lezi imigudu intertemporal, kuyoshaya ukuba usayizi womuntu, kodwa futhi synthesize imigudu zabo.
Hawking uthi ukuthi ilitshe elilandelayo yososayensi abenza ngilinqobile ibanga, ngeke ukuhlehlela emuva ngesikhathi ngomqondo truest izwi. Abantu bayofunda ukusebenzisa wormhole isikhathi travel.
Isikhathi - wabobonke izinto. Futhi manje into inkanuko yakhe - umshini isikhathi. Indlela yokwakha ke? umsebenzi Elomuntu - ukuhambisa inkomishi amandla ukuze zihambelane nabo. Futhi uma eqinisweni lokhu namanje solvable ke omunye ungaphatha isikhathi nomhlaba obonakalayo. Ngokwesibonelo, real-time sekulingisa ekwakheni umkhathi lakho siqu Minecraft (lokhu Simulator sihlinzekela ukunyakaza umdlali ngesikhathi sangempela yonke, okuyinto ngokuhamba umdlalo, kanye ukwanda kwezindawo kancane kancane emhlabeni iba nenkinga) ivumela umdlali ngamunye ukuba ngumnikazi umshini isikhathi. Kwenzani lokhu alikho izwe lethu, okungukuthi e wephrojekthi "Maynkraft"? Indlela yokwenza umshini isikhathi? Sebenzisa imfashini, ayatholakala kabanzi. Ngokuvamile, obungenza ososayensi bethu ezinye iziteshi imfihlo yokuthola iminingwane isikhala, akathanda umshini isikhathi.
ukunyakaza zemimoya ngesikhathi
Nakuba ososayensi kanye gamers ukuziqambela okuyiwa yayo isikhathi sokuhamba, ukuzindla amakhosi kukhona enye indlela: ukuhamba metaphysically.
Njalo umzimba kuleli zwe, eshiya umzila eneji weaved ukuphila kwakhe futhi vibration - isikhala ukuphendula ku ukuhamba kwayo. yogis abanolwazi bayazi indlela uvula le-track, bethi indlela yokuthi baye bakhetha kwenza kube nokwenzeka ukuya esikhathini esidlule futhi emuva. Amandla ukucabanga. Basuke bakhuluma iqiniso? Impendulo kuyadida. Mayelana ezihambayo elifanayo ezintweni eziphilayo ngesikhathi atshele Labelaphi izangoma, kanye nabantu ziyazithanda magic. Baphinde bathi ngokoqobo - uhlobo umshini isikhathi. Ngiyenza njani ukusebenza? Enough ukufeza ngokuvumelana ukuthuthukisa indlela esibukeka ngayo, funda ukuba balahle nezwe elingaphandle, ukuzindla nsuku zonke futhi umkhuba - futhi zonke Kuyophumela ethubeni: ubani angaya endleleni isikhathi emuva naphambili.
Futhi kuthiwani ngesikhathi esizayo? Kungenzeka yini ukusebenzisa ukuzindla ukuze uthole ukhiye golden kusukela emnyango athandwayo? Ngempela, kodwa luhlobo luni lwekusasa uzothola obuka? Kuyinto isikhala iyashintsha kakhulu, oluphazanyiswa ezihlukahlukene izenzakalo. Njalo ngeminithi, ngomzuzwana kuncike ezisebenza ku izinkulungwane lokwehlukile. Uma ukubikezela izimo ukuthatha isinqumo esiqondile - ungafunda mayelana nentuthuko yayo okunye. Le ndlela isetshenziswa ababoni kanye Labelaphi. Kwabonakala sengathi ukhethe ephasishi oyifunayo ezinkulungwane futhi niqhubeke ke, ukubikezela ikusasa.
Wonke umuntu okungenani kanye kodwa wacabanga yini ukuthi ukwenza ngempela umshini isikhathi ukuhlangabezana wena esikhathini esidlule. Ungazibonela ngokwakho futhi mhlawumbe ukunikeza iseluleko esithile. Kulesi sici, sifakazela eyathandwa kakhulu okuthiwa "Amaphilisi isikhathi" lapho iqembu labantu noma othile yedwa bakha umlayezo wena esikhathini esizayo. Umlayezo ingaqukatha ividiyo noma izinto ezibangela umthumeli eminye imizwelo - ngamafuphi, uhlobo ulwazi kusuka esidlule, obekungadala ezithakazelisayo ukuba.
Ngemva ezinye isikhathi "isikhathi capsule" ivulekile futhi kunjengokungathi baxhumane uqobo kusukela esikhathini esidlule. Abantu omunye ngakulolu hlangothi we Unites isikhathi sokulinda nemicabango. Lwenza nesikhathi sendawo continuum - empeleni wangempela isikhathi umshini. Indlela yokwenza - umbuzo akufanele ke.
Ingabe kunzima ukwenza LED ukukhanyisa ngezandla zabo?
Indlela yokwenza Sander ibhande ngoba metal ngezandla zabo?
Ilungiselela i-Windows plastic ebusika. Ukulungisa kusezandleni zakho
Kuhlala ekhatsi Krymu.barer Ingqondo.
Ngazi kanjani OKTMO? Kuyini lokhu?
Kahle khetha air conditioning
Nexus 7. Kubuketa ukuhlola ithebhulethi
Sokuprakthiza Electric: izinhlobo, izici kanye nencazelo, abakhiqizi kanye nokubuyekeza
Emgogodleni spondylosis - Izimbangela, Izimpawu, Ukwelashwa
Standard iprogramme ejimini ngoba amadoda
Lipstick Loreal happy njalo!